Cu Thaton's Floating Donation | UCST
< The Republic of the Union of Myanmar />
Unicode ⇌ Zawgyi
Cu Thaton’s Floating Donation
In: Activities, News and Events By: UCST Editor0Comments
ကွန်ပျုတာတက္ကသိုလ်(သထုံ) ဆရာ၊ဆရာမ များနှင့် ကျောင်သားကျောင်းသူများမှ ဆန်၊ဆီ စသည့်စားစရာပစ္စည်းများနှင့် အလှုငွေများကို (4.8.2018) စနေနေ ့တွင် သထုံမြို့၊ဒူရင်းဆိပ်(ရှမ်းစုရွာ)သို့ သွားရောက်လှူဒါန်းခဲ့ပါသည်။
CU(Thaton) ​မိသားစုရဲ့ယ​နေ့​ရေ​ဘေးအလှူ အဆင်​​ပြေ​ပြေလှုဒါန်​းနိုင်​​အောင်​ ပံပိုးကူညီ​ပေးခဲ့​သော ဦးမင်​းဟံထွန်​းနှင်​့သက်​တန်​့​ရောင်​စဉ်​ လူမှုကယ်​ဆယ်​​ရေးအဖွဲ့ အားအထူး​ကျေးဇူးတင်​ရှိပါသည်။
Seminar on CYBER SECURITY ကျင်းပ
ပညာသင်ဆုများ လျှောက်ထားနိုင်ပါကြောင်း ကြေညာခြင်း
ASEAN Plus Three Youth Environment Forum (AYEF) 2019 သို့ တက်ရောက်နိုင်ရန်အတွက် ဝင်ရောက်လျှောက်ထားနိုင်ပါကြောင်း ကြေညာခြင်း
Archive Posts Select Month August 2019 (5) March 2019 (2) February 2019 (6) December 2018 (3) November 2018 (2) October 2018 (3) September 2018 (1) August 2018 (6) July 2018 (1) February 2018 (1) October 2017 (1) July 2017 (1) March 2016 (1)
တက္ကသိုလ်အဆင့် သုတေသနဂျာနယ်အတွက် စာတမ်းများ၊ ပေးပို့တင်သွင်းနိုင်ကြောင်း ကြေညာခြင်း
The Ministry of Science and Technology is organized under the Ministry of Education as Ministry of Education in April 2016 by the Government of Myanmar, led by Htin Kyaw. There are 57 Universities, Colleges and Technical Institutes under the MOE-ST.
+95 95322584, +959425273242
God Village, Thaton Township
© COPYRIGHT BY UCST. ALL RIGHT RESERVED.